[2014-01-11 오전 2:56:00]
मानिस सामाजीक प्राणी भएकोले समाजमा आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गराउन चाहन्छ । जसले आफ्नो लगनसिलता र अनुसासनलाई आत्मसाथ गर्न सक्छ त्यो नै सफल बन्न सक्दछ । सफल मानिसले समाजलाई केहि दिने भन्दापनि आँपूm समाजमा कसरी स्थापित हुनेमा केन्द्रित हुन्छ र असल मानिसमा हुने गुण उसँग नहुन सक्छ । सफल मानिस आँपूm खुसि हुन्छ उसको आत्मा संतुष्टि हुन सक्दछ । तर समाजलाई खुसि बनाउने ब्याक्ति आँपूm सफल नभए पनि असल हुन सक्दछ । असल र सफल बीचको भिन्नता छुट्ठाउन सक्ने समाजको विकाश चाँडो हुन सक्दछ ।
यसैको सेरो फेरोमा पाठक समक्ष आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु । देशमा बढ्दो बेरोजगारी अनि उद्योग धन्दाको अभाब अर्कातिर शिक्षित र उर्जासिल यूवाहरुलाई बैदेसिक रोजगारमा पठाउने नीति अनि आफ्नो बिस्ताराको झगडा मिलाउन नसक्नेले राष्ट्रिय राजनीतिमा गरिने लबस्तरा कुराले समाजमा सफल ब्यक्तिको उदय त होला तर नेपाली समाजले असल मानिसको आसामा दिर्घरोगि बन्नु परेको छ । देश भित्रका चिया पशल देखि बिदेशका गल्लि अथवा ठूला ठूला सभाहलमा गरिने वहस अनि गोष्ठिमा देश र राष्ट्रको विकाशमा धेरै छलफल हुने गर्दछ । बेरोजगार र गरिबिबाट आक्रान्त भएको बेला अमूल्य श्रम अनि पसिना बेचेर सुनौलो भविश्यको कल्पनामा बाँकी जीवन बिताउने अठोटका साथ हजारौ यूवाहरु दिनानु दिन बिदेश पलायन भएका छन । कडा मिहिनेत, लगनसिलता र इमान्दरीताले धेरै सफल ब्यक्तित्वका धनी भएपनि मानवीय आचरण, आपसि सद्धाव र सभ्य व्यवहारको अभावमा समाजले असल ब्याक्ति पाउन सकेको छैन ।
श्रमको भिखमाग्न नेपाल सरकारद्धारा दक्षिण कोरिया पाठाइएका बिसौ हजार नेपालीहरुद्धारा दक्षिण कोरियामा स्थापना भएका सामाजिक संघ संस्था र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मानवीय आचरण, आपसि सद्धभाव र सभ्य ब्यवहारको कमिले सफल ब्याक्तित्वहरु असल बन्न नसकेको देखिन्छ । कोरियाक संघ संस्थाहरु बिभिन्न सांस्कृतीक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनमा सफल देखिन्छन तर कार्यक्रमबाट के कति आर्थिक लाभ हाँसिल गरियो र समाजमा कस्ता कस्ता असल काम गरियो भन्ने समिक्षा, बिश्लेषण र भाबि योजनाको अभाबमा धेरै कार्यक्रमहरु घाटामा गएको बुझिन्छ । सतप्रतिसत यस्तो नभए पनि समाजमा चिनिएका र ठूला संस्थाको हालत यस्तै छ । त्यसैले सबै आयोजकका अगुवा र नेतृत्व पंतिले आँपूm सफल हुने भन्दा पनि असल भएर समाजलाई नै सफल बनाउन लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।
कोरियामा भएका समस्याहरुलाई केलाउन र नेपाली दूतावासमा जानकारी गराई हाम्रा समस्या समाधानमा सबै जातीय, क्षेत्रीय, पार्टीका भातृ संगठनहरु, एनआरएन कोरिया र बिद्यार्थीहरुको साझा संस्था बीच अन्तरक्रिया गर्न नसक्दा दूतावासले समस्याको जरो केलाउन गाह्रो भएको छ । समस्यामा परेका साथिहरु सम्बन्धित निकायमा नपुगी स्थानीय सामाजीक संस्था र चर्चमा बढी सम्पर्क गर्दा कतिलाई राहात मिलेपनि धेरैको समस्या झन झन जटिल बन्ने गरेको देखिन्छ । अस्पताल नजाने तर रोग निकोपार्न समाजमा हारगुहर गर्दा नेपाली दूतावासले केहिनगरेको टिप्पणी बिभिन्न संचार माध्यममा आइरहेका छन । मैले यसो भन्दै गर्दा समस्यामा परेका साथिहरुलाई नमिठो लाग्ला तर समस्याको जरो सम्बन्धित डाक्टरले मात्र अप्रेशन गर्न सक्दछ जुन दिर्घकालीन र लाभदायी हुन सक्दछ ।
अझ कोरियाको हकमा नेपालीहरुका समस्या किन समयमै दूतावासमा पुग्दैनन र छताछुल्ल भएर समाचारमा आउँछन ? कुरोको चुरो पत्ता नगलाई लेखेका समाचारले कसैलाई सफल पत्रकार त बनाउला तर उ असल पत्रकार बन्न सक्दैन । कसैले लेखेको समाचार वा लेख सकारात्मक र समस्या समाधान गर्ने खालको हुनु पर्दछ । मानिस सामाजीक प्राणी भएर होला समाज सेबी हुन उत्साहित हुन्छ । कोरियामा धेरै नेपालीहरु ब्यापार ब्यावसाय गरेर बसेका छन । धेरै सफल छन कति समाज सेवी भनेर पनि चिनिन चाहान्छन । तर एउटा सफल ब्यक्तित्व समाज सेवामा जाँदा असल भएर जानु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
जसले समाजलाई पनि सफल बनाउन कोसिस गर्दछ । कोरियामा ब्यापार ब्यवसाय गरेर बसेका नेपाली बीचको सम्बन्ध, सहकार्य र विश्वास एकदम न्यून छ, यो तितो यथार्थलाई स्वीकार्न सकेमात्र हामी बीचको असल पन खोज्न सकिन्छ । एउटा सानो मौरीले मेहनत, अनुसासन र एकताबाट धेरै मह जम्मा गर्दछ तर आर्थिकरुपमा धेरै मह जम्मा गरेको ब्याक्ति सानो मौरी जतीको असल बन्न सक्नु पर्दछ । कोरियामा पनि बीस हजार नेपालीहरुको सामु समाजसेबी भनेर सभा र सम्मेलनमा आँपूm सम्मानीत अथवा सफल हुँदै गर्दा समाजमा असल बन्न नसकेको चिन्ता उसको आत्मामा उब्जिनु हुँदैन । अनि मात्र नेपालीहरुका वास्तबिक समस्याको पहिचान र समाधान हुन सक्दछ । त्यसैले असल नभए पनि सफल हुन सकिन्छ तर समाज सेवी हुन सकिन्न भन्ने मेरो धारणा हो ।
कोरियाका साझा समस्याकै बारैमा अलिकति प्रशंग जोड्न चाहन्छु , एक जना साथिलाई भाषाको समस्या भएर कामको कुरा गर्न सिह्वाको कम्पनी गएको थिएँ । फेरी केहि दिन पछि अर्को साथिको समस्याले त्यहि कम्पनी पुग्दा अर्को साथिले भन्नु भयो दाई तपाईको त दलाल अफिस छ की क्या हो ? संधै मान्छे लिएर आउनुहुन्छ त ! दुई बर्ष अगाडी ओइजम्बु भन्ने ठाउँमा केमिकलको काम गर्दा स्वास्थ्यको समस्या भएका एक जन साथि मेरोमा आइपुग्नु भो र मैले उहाँलाई हान्दो अस्पतालमा उपचार गरि साहुलाई जानकारी गराउँदा कति पैसा खाको छस दलाल भनेर गाली ग¥यो । मैले फोन डाक्टरलाई दिएँ पछि आधा घण्टा जति कुरा भएपछि फेरि म सँग साहुले सरि भन्यो । चितवनको एक जना साथिलाई बिरामी हुँदा साहुले उपचार गर्न नलगेको गुनासो गरे पछि अस्पताल लिएर गएको अवस्था जटिल भनेर आजुमा रिफर गरिदियो आजु लगेर भर्ना गर्दा रातको साँढे तीन बजेको थियो ।
काममा भएको घटनामा कम्पनीले सबै खर्च बेहोर्नु पर्छ सम्बन्धित सबै ठाउँमा खबर गरौं भन्दा उहाँ मान्नु भएन आखिर भिषा छोडेर नेपाल जानु भयो । एफ टु मा आउनु भएको झापाको एक जना बहिनीको आँखाको अप्रेशन गर्न खोदे अस्पतालमा गएको उहाँले पनि दुतावासमा भन्न नमिल्ने भन्दै समस्याको जानकारी गराउन मान्नु भएन । धादिङ्गको एकजना पचास काट्नु भएको दिदीको कोरियन श्रीमान वितेर अंश मुद्धामा भाषा उल्था गर्न थेजनको कानूनी कार्यालय जाँदा यस्ता अनगिन्त नेपालीहरुले आफ्ना समस्यालाई सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन नसकेको मेरो बुझाइ छ ।
त्यसैले समस्या सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन सबै संघ संस्था, समाजसेवीहरुले नेपाली दुतावासलाई सहयोग गरेर आँपूm असल बनेमात्र वास्तबिक समाजसेवि हुन सकिन्छ । समाजसेबि धेरै हुँदा हुदै असल ब्याक्तिको कमिले समस्याका चाँङ्गहरु थपिएका पनि छन । समस्याहरुको बारेमा वास्तबिक अध्ययन नगरी लेखिएका समाचारले पनि समाधान भन्दा समस्या थप्ने गरेको छ । एउटाको विचार अर्को सँग मेल नखाएपनि समाचारमा लेखिएका कुराहरु समाजमा सकारात्मक वा असल हुनु पर्दछ । आँखाले देखेको कुरा लेख्नु र बोल्नु पत्रकारीताको धर्म हो भने सत्य तथ्य जानकारी पाउने अधिकार समाजको हो । जसको लागि पत्रकार पनि असल हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालीहरुको समस्यामा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा दूतावासले पनि असल भूमिका खेलेमा समस्या समाधानको लागि सुनमा सुगन्ध हुन सक्दछ । त्यसैले जबसम्म स्वस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर समाजमा असल बन्न सकिंदैन आफ्नो सफलताको कुनै अर्थ रहँदैन । कोरियाको समाजले सफल हैन असल ब्याक्तिको पहिचान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।